Maamulka Kismaayo oo beeniyey inay is khilaafsan yihiin Dowlada Federaalka. - Horseed Media
Maamulka Kismaayo oo beeniyey inay is khilaafsan yihiin Dowlada Federaalka. December 28, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleAxmed Madoobe
Guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee maamulka Kismaayo Axmed Madoobe ayaa sheegay in saxaafadda qaarkeed ay buun buuniyeen khilaaf la sheegay inuu ka dhaxeeyo maamulka Kismaayo iyo Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Axmed Madoobe ayaa kulan dheer la qaatay Wafdi heer Wasiiro ah oo ka socda dowlada Federaalka Soomaaliya kuwaasi oo magaalada Kismaayo gaaray maalinimadii shalay.
Maamulka Kismaayo ayaa sheegay in ayagu dhankooda la socon khilaafka ay saxaafadda qaarkood ay si weyn u baahinayeen balse wuxuu sheegay in wadatashi ay la leeyihiin dowlada Federaalka oo wafdi ka socda xukuumda markii ugu horeysay u dirtay magaaladaasi.
Wafdiga ka socda Dowlada Federaalka oo ka kooban Wasiiro ayaa waxaa kamid ah, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Wasiirka Gaashaandhiga, Wasiirka Garsoorka, Wasiirka Warfaafinta iyo Saraakiil kale, waxaa sidoo kale safarkooda ku wehliya suxufiyiin kasoo raacay magaalada Muqdisho.
Wafdigan ayaa maanta kormeer ku tagay Dekkada iyo Isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo.
Tan iyo intii magaalada Kismaayo laga saaray xoogagii horey u heystay ee Al Shabaab, ayaa waxaa soo baxayey murran la sheegay inuu u dhaxeeyo kooxda Raaskambooni iyo maamulka Dowlada Federaalka ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Murrankan ayaa la rumeysan yahay inuu salka ku hayey maamul u sameynta gobalada Jubooyinka iyo waliba maareynta illaha dhaqaalaha ee magaalada Kismaayo, gaar ahaan Dekkada iyo Airporka.
Maamulka Kumeelgaarka ah ee looga dhawaaqay magaalada Kismaayo isla markaana hogaamiyaan xubno kamid ah Raaskambooni iyo qaar kamid ah saraakiil deegaanka kasoo jeeda ayaa weli aqoonsi rasmi ah ka heysan dowlada Federaalka oo ayadu marar badan ku cel celisay inay ayadu maamul usoo magacaabi doonto gobalada Jubooyinka iyo gaar ahaan magaalada Kismaayo.
Waxaa doodan sii xoojisey hadalada kala gedisan oo ay Saxaafadu baahinayeen kuwaasi oo ay kasoo baxeen qaar kamid ah mas’uuliyiinta dowlada iyo kuwa maamulka Kismaayo.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa muddo bilo kahor ah laga soo celiyey wafdi ka socday dowlada Federaalka oo ka koobnaa xubno guddi uu soo magacaabay Madaxweynaha, balse wafdiga todobaadkan booqashada ku tagay Kismaayo ayaa ah kii ugu horeeyey oo heer Wasiiro ah oo magaalada Kismaayo gaara.
Xubno ku dhaw dhaw maamulka Kismaayo ayaa Horseed Media u sheegay inaysan weli jirin wax heshiis ah oo laga gaaray qaabka maamulka loogu sameenayo gobalada Jubooyinka iyo Gedo, iyagoo intaasi raaciyey inay jiraan wadahadalo ka baxsan maamulada oo u socda beelaha gobaladaasi ku dhaqan oo ayagu doonaya inay sameystaan ismaamul gobaleed u gaar ah oo hoostaga Dowlada Federaalka.